Baydhabo oo Maanta laga Xusey Aas Aaskii RRA Sanad Guuradii 22aad | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Baydhabo oo Maanta laga Xusey Aas Aaskii RRA Sanad Guuradii 22aad
Baydhabo oo Maanta laga Xusey Aas Aaskii RRA Sanad Guuradii 22aad
Waxaa Maanta Magaalada Baydhabo ee Caasimadda ku meel gaarka ah ee KGS lagu qabtey Xaflad aad u weyn oo lagu Xusayey Sanad Guuradii 22aad ee RRA oo ay ka qeyb galeen masuuliyiin kala duwan oo koonfur galbeed ah iyo Bulshada Noocyadeeda kala duwan
#RRA oo Micnaheedo yahay afka laatiinka (Rahanwien Resistance Army) Ururka iska caabinta ee Raxawayn, ayaa ah Uuru ka soo baxay Koonfur Galbeed ee Soomaliya.
RRA waxaa lagu Aasaasay shir lagu qabtay 13-kii Octobar 1995, Jhaffay oo ah meel kaga beegan Magaalada Baydhabo dhinaca Galbed. Col. Xasan Maxamed Nur “Shaatigaduudna” loo dooraty Godoomiyinimo.
Sababta loo aasasay waxay ahayd in uu Tababar Military iyo waliba mid dareensiin wadananimo lagu dheliyo Dhalinyarta Raxwayn si ay isaga difacan xad gudubyada Bani’aadinimo ee kaga iman jiray Qabaa’illada kale ee Somaalida.
Dagaalo tiro badan oo lagu baab’ay ka dib.Ururkaan waxay ku guulaysateen in ay gacanta ku dhigaan Magaalada Xudur Octobar 1998-dii. Horaantii November Mileeshiyaadkii Caydiid waxay ku soo uruureen Magaalada Baydhabo. Guushaan Xudur ayaa Ururkaan waxay usoo jiiday sumacad ballaran uu ka kasbaday Bulshada Gudaha iyo mida Dibadda. (Both International Community and Oragnisations ).
6-dii June 1999-kii, ayaa RRA waxay ku guulaysteen in ay ka saaraan Magaalada Baydhabo Mileeshiyaadkii haystay iyagoo gaaray Shabeellada Hoose. Si kasataba ha ahaatee Shirkii lagu qabatay Tuulada carta ee Wadanka Jabuuti inta u dhgaxaysay May-August 2000 laguna soo dhisay Dowladii Madaxwaynaha ka noqday Dr. Cabdiqaasim Salaad Xasan, ayaa wiiqay inta badan Hammigii iyo waliba cududii Military ee RRA.
Kadib markii la soo dhisay Dowladaas ayna soo wada galeen heshisyo Madaxada Dowladaasi iyo kuwa Ururka RRA ayaa dhaqangali waayay. Taasina waxay dhelisay in ay ka baxaan Dowllada una googol xaaraan Maamul Goboleed ay samaysteen Gobollada K/Galbeed looguna Magaca daray “ Southwestern Somalia”.
Balse dadaalkaas iyo himiladii ahayd in ay dhisaan Maamulkaas waxay u kentay Urukaan in cad cad ukala jabo Awoodii iyo Sumacadii kasbadayna noqotay HAL BACAAD LAGU LISAY.
Ururka RRA oo noqday inta uu jiray mid Soomaalida oo dhan ay u riyaaqday sida uu amniga iyo arimaha bulshada uu wax uga qabtay ayaa manta wuxuu ku dhowyahay in taariikhda Soomalida laga masaxo. Waxyaabaha lagu xasuusto ayaa waxaa ka mid ah in Bulshada u dhalatay wadanka iska daayee xitaa Ajaanibta kala duwan ee Adunka Dacalladisa ku nool ay si damaashaad leh ugu Naaloon jireen Magaalooyinka uu maamuli jiray gar ahaan Magaalada Baydhabo. Taas oo waliba Ururkan kaga duwanaa dhamaan Ururada tirada badan ee ka jirey Wadanka Soomaaliya.
Dhab ahaantii sida uu ku bilawday Urukaan waxan dhihi karnaa Kacdoon shacbi oo ka dhasahy xasuuq iyo qiimo dhinac baaxad leh oo loo gestay bulsho dhan oo leh Dhaqan suuban iyo ku dayasho diimeed iyo Asluub wanaagsan.
Kacadoonkaan marka aan ka eegno dhinaca caalami, waxaa la mid dhigi karnaa kii ka dhacay Wadanka Faransiiska inta u dhaxaysay 1786-1850. Balse kacdoonkaan waxa uu dheliyay in laga qaalib noqdo dhamaan wax yaalihii sababay kacdoonkaas walibana uu dhaliyay Dowlad salballaran oo ku daysho noqotay Guud ahaan Aduunka. Kacdoonkaan wuxuu wadanka faransiiska ku soo celiyay xasilooni dhinaca walba leh taaso waliba la ogaa sida uu ahaa Dhaqaalaha Wadankaasi kacdoonka ka hor. Maxay kula tahay labada waa ay ku kala duwan yihiin marka laga reebo Xeerka kacdoonka, waayo Mid wuxuu ahaa Wadan oo dhan midna wuxuu ku ekaa Gobollo.
Marka aan u soo laabano Wadanka Gudihiisa waxa kacdoonka RRA-da la mid ah ka dhacay Magaalada Caasimadda Mogadisho Sanadkii 2006-da kuna dhasheen Maxakamadihii Xukumayay 6 bilood wadanka. Balse miro dhalkiisa noqday mid ka daran RRA. Sababta oo ah RRA cimrigeeda wuxuu gaaray 3 Sanno halka qolooyinkan Sanadba gaari waayay. Midaan waxay Muujinaysaa in Soomalida aysan aqrin isbedellada waawayn ee Adoonka ka dhaca ayna tahay in lagu daydo.
Ururka RRA dadkii Aasasay waa ay jogaan manta. Inta badan sidii shalay in ay ka khibrad badan yihiina dhinaca siyaasada waa arin aan la iswaydiinaynin, Maxaa loo soo xasuusan wayay la iskuna Buraarujin waayay in midkaa iyo mid ka sumacad wanaagsan la soo celiyo waayo Jaaniskii shalay manta ayaa ka wanaagsan waxaa soo kordhay Aqoonyahanno, Siyaasiin aan shalay jirin walibana u istagi kara Isbedello loo wada riyaaqo.
Waxaan Aqoonyahannada, Siyaasiyiinta, Salaadiinta & Malaaqyada, Ururada Bulshada ka howlgala Gobolladaasi ugu baaqaynaa in ay ka tagaan Damac gaar ahaaneed ( Personal ambition) una istagaan danta guud si ay Mustaqbal iyo Ubad Maskax fiyow leh u Abuuraan.
Nin waliba isaga ayaa aayihiisa ka tashto.
Napoleon waxaa laga soo xigtay in uu yiri “ waxaa la idhalay markii uu wadankayga Dhimanayay” I was born when my country was dying, waa in la helaa nin sidaas iyo si la mid ah ah, kana soo baxa RRA-da cusub.